47 Yehowa asɛm a ɛbaa odiyifo Yeremia nkyɛn wɔ Filistifo+ ho ansa na Farao rebɛsɛe Gasa no ni.+ 2 Nea Yehowa aka ni: “Hwɛ! Nsu fi atifi+ fam reba,+ na ayiri rebu fa so. Ebeyiri afa asase no ne nea ahyɛ no mã, kurow no ne wɔn a wɔtete mu nyinaa.+ Nnipa bɛteɛteɛm, na wɔn a wɔtete mu nyinaa betwa adwo.+ 3 Sɛ wɔte n’apɔnkɔnini+ nan a ɛpempem fam kimkim ne ne ko nteaseɛnam+ a ɛyɛ twɛtwɛrɛdɛdɛ ne ne ntwahonan+ a etwa ne ho kitikiti no a, agyanom rentwa wɔn ani mpo nhwɛ wɔn mma, wɔn nsam a agow nti, 4 efisɛ ɛda no reba a ɛbɛsɛe Filistifo+ nyinaa na atwitwa Tiro+ ne Sidon+ aboafo a wɔaka nyinaa.+ Na Yehowa bɛsɛe Filistifo+ a wɔaka a wofi Kaftor+ nsuano man mu no. 5 Gasa+ ti so bɛpa.+ Askelon+ bɛyɛ dinn. Wɔn asasetaw sofo a moaka, mubetwitwa mo ho akam+ akosi da bɛn? 6 “Ahaa, Yehowa nkrante!+ Da bɛn na wobɛyɛ dinn? San kɔhyɛ wo boha mu.+ Home, na yɛ komm. 7 “Ɛbɛyɛ dɛn na ayɛ dinn bere a Yehowa na wahyɛ no? Ɛreba Askelon ne mpoano+ asase no so. Ɛhɔ na wahyɛ sɛ ɛmmra.”